Dawnmanhon( ဒေါင်းမာန်ဟုန် ): November 2007
စည်းလုံးညီညွတ်ကြရန် (၉၂) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့၌ လူထုဒေါ်အမာ တိုက်တွန်း
နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇သတင်းစာဆရာ၊ စာရေးဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာ၏ အသက် (၉၂) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို မန္တလေးမြို့ရှိ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်၌ ယနေ့ကျင်းပ၍ သံဃာတော်အပါး (၁) ထောင်ကို ဆွမ်းကပ်လှူဒါန်းကြောင်း မွေးနေ့ပွဲ တက်ရောက်သူတို့ကပြောကြားသည်။
မွေးနေ့ပွဲသို့ မောင်မိုးသူ၊ မောင်ဝံသ၊ ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညို၊ ကျော်ရင်မြင့်၊ ကြည်အောင်၊ကိုလေး၊ ထက်မြက် စသည့် စာပေအနုပညာရှင်များအပါအ၀င် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ လူထု ဒေါ်အမာကို ချစ်ခင်လေးစားသူ (၃၀၀) ခန့်က ဒေါ်အမာကို လာရောက်ဂါရ၀ပြုကြကြောင်း သိရသည်။
အသက်အရွယ်ကြီးနေပြီဖြစ်သော်လည်း ကျန်းမာရွှင်လန်းဆဲရှိနေသည့် လူထုဒေါ်အမာက“အမေ့မွေးနေ့က (၉၂) နှစ်ပြည့်တဲ့မွေးနေ့။ တနှစ်ပိုပြီးတော့အိုဦးမှာပေါ့။ အိုတဲ့အတွက် ဘာမှ မကောင်းဘူးလေ။ နားရော မျက်စိရော ဘာရော အိုတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာတတ်နိုင်မှာတုန်း၊ ဒီလိုပဲခံရမှာပေါ့။ အိုသည်ဖြစ်စေ ပျိုသည်ဖြစ်စေပေါ့နော် လုပ်စရာတွေကတော့ ရှေ့မှာရှိတယ်ဟေ့။ အဲဒါအကုန်လုံး ညီညီညွတ်ညွတ် စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့လုပ်နိုင်ရင် တို့သက်သာမှာပဲ။ အမှတ်တရ အမေတော့ ဒါပဲပြောချင်တယ်” ဟုခေတ်ပြိုင်သို့ မွေးနေ့အမှတ်တရစကား ပြောကြားသည်။
ဆရာမကြီး၏ မွေးနေ့ပွဲသို့ နှစ်စဉ်တက်ရောက်နေကြ ဆရာလူထု စိန်ဝင်း၊ ဆရာဒဂုန်တာရာ၊ မြန်မာ့အလင်း သန်းညွန့် တို့လည်း ယခုနှစ် တက်ရောက်လာသည်ကို မတွေ့ရှိကြောင်း ကိုယ်တိုင်မွေးနေ့ပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သူ မန္တလေးမြို့မှ စာပေသမားတဦးက ပြောသည်။“ဒီလိုအခမ်းအနားမျိုးကို တက်ခွင့်ရအောင် ကြိုးစားကြတာချည်းပါပဲ၊ အခုလို အမေလူထု ဒေါ်အမာ ပြောနိုင်ဆိုနိုင်နဲ့ ကျန်းမာနေသေးတာ၊ သွားနိုင်လာနိုင် သေးတာကို ၀မ်းသာရပါတယ်၊ အသိမိတ်ဆွေတွေ ဆုံကြရတယ်၊ နောက်နှစ် ဆိုတာက ဒီအခွင့်အရေး ရချင်မှရမယ်၊ သက်ကြီးရွယ်အို ပညာရှင်တယောက် ဖြစ်ပြီး လူအများကို ကိုယ်စားပြုပြောဆို လုပ်ဆောင်မှု တွေအပေါ်မှာ လေးစား ပြီးဒီပွဲကိုတက်တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟုလည်း ၎င်းက ပြောပြသည်။
ဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာ၏ မွေးနေ့ပွဲကို နှစ်စဉ် အမရပူရ မြို့တောင်လေးလုံး ကျောင်းတိုက်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ယမန်နှစ်က အာဏာပိုင်များ တားမြစ်သော ကြောင့် ဆရာမကြီး၏ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်သန်းရင်မာ နေအိမ်တွင် အကျဉ်းရုန်း၍ ပြုလုပ်ခဲ့ ရသည်။
အဆိုပါ ဆရာမကြီး၏ မွေးနေ့ပွဲသို့ နယ်ပယ်အစုံမှ ဆရာမကြီးကိုလေးစားသည့် ပရိသတ်များက နှစ်စဉ် တက်ရောက်ကြ ရာတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်က လက်ရှိစစ် အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း ခံထားရသော ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများကလည်း သွားရောက် ဂါရ၀ပြုခဲ့သည်။
စာရေးဆရာနှင့် သတင်းစာဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာသည် ကျောင်းသားဘ၀က အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် ကျောင်းနေဖက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယ ကျောင်းသားသပိတ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ လူထုဦးလှနှင့် အိမ်ထောင်ကျ ပြီးနောက် လူထုတိုက်ကို ထူထောင်၍ လူထုဂျာနယ်၊ လူထုသတင်းစာများကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ဆရာမကြီးသည် ကလောင်အမည်ခွဲ ၈ ခုဖြင့် ပင်ကိုရေးနှင့် ဘာသာပြန် စာပေများကို ရေးသားပြုစုခဲ့ပြီး ထင်ရှားသော စာအုပ်များမှာ ၁၉၆၄ ခုနှစ် စာပေဗိမာန် အနုပညာဆိုင်ရာစာပေ ပထမဆုရ ပြည်သူချစ်သော အနုပညာသည်များ၊ မဟာဂီတ၊ ရွှေဒေါင်းတောင် ဆောင်းပါး၊ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာအုပ်၊ အမေ့ရှေးစကား စသည်တို့ ဖြစ်သည်
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 8:36 AM2comments
ကုလအထူးသံတမန် ဂမ်ဘာရီကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး မောင်ဦး ပြင်းပြင်း ထန်ထန်ဝေဖန်
နအဖ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦးသည် မောင်တောမြို့၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည် ဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံသည့် အစည်းအဝေးတွင် ကုလ အထူးသံတမန် ဂမ်ဘာရီအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြစ်တင် ဝေဖန်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သူ ၀န်ထမ်း တဦးက“သူက ဂမ်ဘာရီဟာ ရိုးသားမှုမရှိဘူး။ လာကတည်းက ထောင်သား အယောက် ၂၀ စာရင်းကို ကိုင်ပြီးလာတယ်၊ သူတို့နဲ့ တွေ့ဖို့တောင်းတယ်။ အမေရိကန် အစိုးရ အကြိုက် လိုက်လုပ်နေတယ်။ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ ၅ ဦးနဲ့ တွေ့ပေးလိုက်တယ်။ သူမကျေနပ်ဘူး။ ပြန်သွားတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ရောက်တော့ ကျနော်တို့ မကောင်းကြောင်း ပြောသွားတယ်။ ဒီလူတွေကို ယုံလို့ မရဘူး။ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ကြ။ ဒီနိုင်ငံ တိုးတက်မယ့် အလုပ် ဘယ်နိုင်ငံခြားသားမှ လာလုပ်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။” စသဖြင့် ပြောကြား သွားသည်ဟု ပြောသည်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး မောင်ဦးသည် မောင်တောမြို့တွင် ဆောက်လုပ်မည့် သိန်း ၁၈၀၀ ကုန်ကျမည့် ခရိုင်ရုံးသစ် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် နိုဝင်္ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က ဆွေးနွေးရန် လာရောက်စဉ် ဂမ်ဘာရီ မကောင်းကြောင်းကို ပြောသွားခြင်း ဖြစ်သည်။“ သူက ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ဂမ်ဘာရီ မကောင်းကြောင်းပြောတော့ ဒါဟာ အစိုးရရဲ့ သဘောထားမျိုး သက်ရောက်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင် ဒါဟာ ကုလသံတမန် ဂမ်ဘာရီအပေါ် နအဖ စစ်အစိုးရရဲ့ ထားရှိတဲ့ သဘောထား ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ၀န်ထမ်းက ပြောသည်။အစည်းအဝေးသို့ မောင်တောခရိုင်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ နစက တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ၀န်ထမ်း စုစုပေါင်း ၁၅၀ တက်ရောက် ခဲ့သည်။အစည်းဝေးကို မောင်တောမြို့ ခယကရုံး တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ညနေသုံးနာရီ မှ ငါးနာရီထိ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။၀န်ကြီး မောင်ဦးသည် မောင်တောတွင် ရောက်ရှိနေစဉ် နစက ဌာနချုပ်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းတွင် ဘုးသီးတောင်သို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။
“ ၀န်ကြီးမောင်ဦး လေသံက အရင်ကနဲ့ မတူဘူး။ တော်တော် ပျော့ညံ့နေတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေကို စည်းရုံးတဲ့ အနေနဲ့ ပြောသွားတာ။ အရင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တိုင်းမှူးဘ၀ ရှိစဉ်က ပြောခဲ့တဲ့ လေသံမျိုး မဟုတ်တော့ဘူး။ တခြားစီဖြစ်နေတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေ အပေါ် နိုင်ငံတော်က ဘယ်လောက်ထိ တာဝန်ကျေသလဲဆိုတာကို ပြောတာကတော့ တကယ့် စည်းရုံးရေး သမားတဦးလိုပါဘဲ။” ဟု အဆိုပါ ၀န်ထမ်းကပြောသည်။၀န်ကြီး မောင်ဦးသည် အနောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူးဘ၀ဖြင့် ရှိနေစဉ် ရခိုင်အမျိုးသားများ အပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်ကွက်ခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် စီးပွားရေး တခုလုံးကို နလံ မထူနိုင်အောင် ဖျက်ဆီး ပစ်ခဲ့သူ တဦးဖြစ်သည်ဟု ရခိုင်အမျိုး သားများက အမြင်ရှိကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီးနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အား အုပ်ချုပ်ခဲ့သော တိုင်းမှူးထဲတွင် တိုင်းမှူးမောင်ဦးမှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်ကြောင်းကို ရခိုင်အမျိုးသားများက မှတ်တမ်းတင်ထားခြဲ့ကပြီး သူပြောခဲ့သော “မောင်ဦးလက်သီး လူမရွေး”ဆိုသော စကားမှာလည်း ရခိုင်လူထုအကြားတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြောဆိုနေသော စကားရပ် တခုဖြစ်နေကြောင်း အဆိုပါ ၀န်ထမ်းကပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ကို ဂျပန်ရောက်မြန်မာများ အပြည့်အ၀ထောက်ခံ
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 8:12 AM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 8:42 AM0comments
၁။ ကျောင်းသားပြည်သူလူထုအားလုံး အနီရောင်ဝတ်စုံ (သင်္ကန်းရောင်ကိုယ်စားပြု)၀တ်ဆင်ကြရန်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 10:17 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 10:14 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 9:18 PM0comments
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တနေရာသို့ လွတ်မြောက်ရောက်ရှိလာသူ စက်တင်ဘာအရေးတော်ပုံခေါင်းဆောင် ကဗျာဆရာအောင်ဝေးနှင့် interview
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 7:25 PM0comments
မြန်မာနိုင်ငံသား အတော်တော်များများက နိုင်ငံတော်အစိုးရ ရဲ့ ပေါ်လစီ မူဝါဒတွေကို တရားသည်ဖြစ်စေ။ မတရားသည်ဖြစ်စေ မှန်သည်ဖြစ်စေ။ မှားသည်ဖြစ်စေ ဝေဖန်တယ်ဆိုရင်ပဲ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့ယူဆကြဟန်တူပါတယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ငြိစွန်းတယ်။
လောကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းလာခြင်းဟာ သတ္တ၀ါတွေကောင်းကျိုးချမ်းသာအတွက် ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဘုရားရှင်က သူရဲ့ တပည့်သားသံဃာတွေကို ဒေသစာရီ လှည့်လည်ပြီးလောကလူသားတွေရဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာအကျိုးငှါ တရားဟောကြလို့ မိန့် တော်မူခဲ့တာပဲ။ သဘောကတော့သာသနာပြုခိုင်းလိုက်တာပဲ။
ဘာနိုင်ငံရေးတောင်းချက်မှမပါဘူး။ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဆိုသူတွေတောင် ကျမ္မာပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့ ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အာဏာရှင်ဆိုတာက ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ လိုလားတာက အာဏာပဲ။အာဏာရဘို့ အာဏာမြဲဘို့ ဆိုရင် ဘာပဲလုပ်ရ လုပ်ရ လက်မနှေးတဲ့လူတွေပါ။အဲဒီလို အာဏာရူးနေတဲ့သူတွေ အုပ်ချုပ်နေတာကို အစိုးရအုပ်ချုပ်နေတာလို့ ပြောလို့ ရမလား။ အစိုးရ ဆိုတာ အခုခေတ်အနေနဲ့ ပြောရရင် လူထုက ဒီမိုကရေစီ နည်းကျ ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းခံရတဲ့အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားဖြစ်တယ်။ အဲဒီလူတန်းစားက လူထုကို အလုပ်ကျွေးပြုရတယ်။လူထုဆန္ဒကို မဆန့် ကျင်ရဘူး။ ဒါ အခုမှမဟုတ်ဘူး။ ဟိုး ရှေးပဝေသဏီကထဲက ရှိတဲ့ ပေါ်လစီ မူဝါဒဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့သူကို ရာဇာမင်းလို့ ခေါ်ကြတယ်။
အတ္ထစရိယာ -တိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ရမယ်။ ကိုယ်ကမဆောင်ရွက်နိုင်ရင် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူကို အားပေးရမယ်။
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံက လက်တဆုပ်စာ စစ်အုပ်စုကလက်နက်အားကိုးနဲ့ တိုင်းသူပြည်သားတွေကို အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်နေခြင်းဟာ အစိုးရ အလုပ် လုပ်နေတာလား။သူခိုးဓမြအလုပ်လုပ်နေတာလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာကိုမလိုဘူး။လူတိုင်းသိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 11:24 AM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 9:57 PM0comments
မြန်မာ့အရေးသုံးသပ်ချက် ဗီဒီယိုများ အပိုင်း ( ၁ )
မြန်မာ့အရေးသုံးသပ်ချက် ဗီဒီယို အပိုင်း ( ၂ )
လူသွားလမ်းပေါ်မှာ လက်ချင်းချိတ်လို့ သုံးယောက်တတန်း ရှေ့နောက်တန်းလိုက်ကြတာ ၁၅ တန်းလောက် ရတယ်။ ဟိုး ရှေ့ဆုံးက သုံးယောက်က အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့ ဘန်နာ အကြီးကြီးကို ကိုင်လို့။ ရေးထားတာက “မြန်မာတွေရဲ့ ဆန္ဒကို နားထောင်ပါ။ စစ်အစိုးရရဲ့ အမိန့်ပေးမှုကို နားမယောင်ပါနဲ့” တဲ့။ နောက်ကလူတွေကလည်း တတောင်ဆစ်ချင်းချိတ်ထား တာဆိုတော့ အားနေတဲ့လက်ချောင်းတွေထဲမှာ အေဖိုးဆိုက်နဲ့ ရေးထားတဲ့ တောင်ဆိုချက်တွေကို ကိုင်ပြီး ရင်ဘတ်ရှေ့မှာ ထောင်ထားကြတယ်။ လမ်းသွားလမ်းလာတွေ ၀ိုင်းကြည့်ကြတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြ။ ရပ်ကြည့်ကြပေါ့လေ။ပထမတော့ အရပ်ဝတ်ရဲတွေဘဲ ရှိသေးတယ်။ ရဲတွေ အင်အားများများ ရှိမနေဘူး။ မီဒီယာတွေက စိတ်တိုင်းကျ ရိုက်ယူကြတယ်။ ငါတို့အထဲမှာ မီဒီယာ တာဝန်ခံ နှစ်ယောက်က ဘေးကနေ မီဒီယာတွေကို အင်တာဗျူး ဒိုင်ခံဖြေပေးတယ်။ အဲသည်လိုနဲ့ မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာတော့ ရဲတွေ ရောက်လာတယ်။ကြိုတင်တိုင်ပင်ထားတဲ့အတိုင်း အားလုံး သုံးယောက်တတွဲကနေ လမ်းမဘက်ကို မျက်နှာလှည့်လိုက်ပြီး လူငါးဆယ်အတန်းရှည်ကြီး လက်ချင်းယှက်ပြီး တွဲရပ်လိုက်တယ်။
ငါ့ညာဘက်မှာ ငါ့မိန်းမ။ ငါ့ဘယ်ဘက်မှာ ငါမသိတဲ့ လူတယောက်။ ညာဘက် တယောက် ကျော်မှာ ဘလော့ဂါမိန်းကလေးငယ်တယောက်။ ငါက ရွှတ်နောက်နောက်နဲ့ “ငါတို့တွေ အာဆီယံ ၀န်ကြီးတွေ လက်ယှက်သလို ခရော့စ်ပုံစံနဲ့ ယှက်ကြမလား” ပြောတော့ အားလုံး ၀ိုင်းရယ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီ အာဆီယံ လက်ယှက်ပုံစံဟာ အင်မတန် မျက်စိထဲမှာ ထော်လော်ကန့်လန့်နိုင်တယ်။ ကိုယ့်ဘေးကလူနဲ့ အနီးဆုံးလက်နှစ်ဘက်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ယှက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ ဝေးတဲ့ဘက်ခြမ်းက လက်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ လှမ်းဆွဲကြရတာမျိုးလေ။ အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံဘို့ လက်တွေယှက်ကြတိုင်း လက်တွေမှားမှားထုတ်ကြတုန်း။ အဲဒါကြောင့်ပြောတာ။ အာစီယံဟာ အစစ ထော်လော်ကန့်လန့်တွေချည်းဘဲလို့။ လက်ချင်းကောင်းကောင်းယှက်တတ်ဖို့တင် ဆယ်နှစ်လောက် အချိန်ယူရမယ်။ ဥရောပယူနီယံလို အသင်းအဖွဲ့မျိုးဖြစ်လာဘို့ဆိုရင် နောင်ဘုရားတဆူပွင့်တဲ့အထိ စောင့်ရမယ်ထင်တယ်။ငါတို့အားလုံး ရဲတွေရှေ့မှာ အဲသည်အနေအထားနဲ့ ဆယ်မိနစ်လောက် ရပ်နေကြတယ်။ ငါ့စိတ်ထဲမှာ ငါ့ရှေ့က ရဲလူဖလံလေးကို ကြည့်ပြီး “သူ့ခမြာ ငါ့ကိုဖမ်းရင် မ မှ မနိုင်ပါ့မလား” တွေးပြီး စိတ်မောနေမိတယ်။ နောက်တော့ ငါတို့ အေးအေးချမ်းချမ်းဘဲ လူစုခွဲလိုက်တော့တယ်။
ကိုပေါ။(၂၀ ရက်။ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်)
စင်္ကာပူမှ မြန်မာဆန္ဒပြပွဲ ဗီဒီယို ကို ဒီမှာ ကြည့်ပါ။ http://www.straitstimes.com/Video+News/Singapore/STIVodcast_3070.html?playid=3070&type=Singapore
ဘီဘီစီ “ငပွကြီး”မဟုတ် အစစ်အမှန်“ငပွကြီး”သန်းရွှေဟုပြော၍ စစ်သည်တဦး သေဒဏ်ချမှတ်ခံရ
စစ်တွေအခြေစိုက် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတပ်ရင်းမှ စစ်သည်တဦးက မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေမှုများမှာ သန်းရွှေ“ငပွကြီး”ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခြင်းကြောင့် မကြာသေးမီက သေဒဏ်အပြစ်ပေးခံရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ သေဒါဏ်အချခံရသူမှာ စစ်တွေအခြေစိုက် အမှတ် (၈၂၈) ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး တပ်ရင်းမှ တပ်ကြပ်အောင်နိုင်ဖြစ်သည်။တပ်ကြပ်အောင်နိုင်မှာ ယခင်က အန်အလ်ဒီပါတီ၏ လုပ်ရပ်များကို ထောက်ခံအားပေး မှုကြောင့် တပ်တွင်းအချုပ် နှစ်ကြိမ်ကျခံဖူးသူဖြစ်ပြီး ရာထူးအချခံထားရသူဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး အဆိုပါတပ်ရင်းမှ အမည်မဖော်လိုသူ စစ်သည်တဦးက “ဆန္ဒပြတာတွေ ဖြစ်ကတည်းက တပ်ရင်းမှုက အရာရှိစစ်သည်အားလုံးကို ခဏခဏတန်းစီပြီး ဘီဘီစီနဲ့တခြားသတင်းဌာနတွေက သန်းရေ“ငပွကြီး”လုပ်ထားတာကြောင့် တိုင်းပြည် အခုလိုဖြစ်နေတာဟု မဟုတ်တာတွေလျောက်ပြောနေတယ်ဟု တပ်ရင်းမှူးကပြောပါတယ်၊ အဲလိုပြောအပြီးမှာ သန်းရွှေ“ငပွကြီး”လုပ်တာတွေကို ကမ္ဘာကသိအောင် ဘီဘီစီ-ဗွီအိုအေ တို့က ဖြစ်ရပ်မှန် သတင်းတွေ လွှင့်ပေးနေတာပါလို့ ဆရာအောင်နိုင်က ပြောပါတယ်၊ အဲဒီလိုပြောတာနဲ့ သူ့ကို ချက်ချင်းဖမ်းယူ သွားပါတယ်ဟ”နိရဉ္စရာသို့ပြောသည်။
တပ်ကြပ်အောင်နိုင်၏ ဖြစ်စဉ်များမှာ တပ်ရင်းတည်မြဲအမိန့်များအရ ထူးခြားဖြစ်စဉ်၌ အကျုံး ၀င်၍ (၂၄)နာရီအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ကွပ်ကဲမှူး စစ်ဌာနချုပ်များသို့ ကြေးနန်းပို့ရပြီး စစ်သည်တရားခံအား တပတ်အတွင်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သို့ အရောက်ပို့ရကြောင်း စစ်ဥပဒေနှင့်စည်းကမ်းဆိုင်ရာ တပ်ကြပ်ကြီး စာရေးတဦးကဆိုသည်။
အဆိုပါ စစ်သည်မှာ တပ်မတော် အက်ဥပဒေအရ တပ်တွင်းအချုပ်ဖြင့် ပြီးဆုံးနိုင်သော်လည်း နည်းဥပဒေဖြင့် တရားစွဲခံရသောကြောင့် သေဒဏ်ချမှတ်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီး သေဒဏ်အမိန့်ကို စစ်ဥပဒေချုပ်ရုံးမှ အထူးစစ်ခုံရုံးဖွဲ့၍ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ ချမှတ်ရကြောင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်စဉ်များ နောက်ထပ်ဖြစ်ပွားမှုမရှိစေရန် တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များသို့ အမိန့်ညွှန်ကြားစာများဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီဖြစ်ကြောင်းကို ၎င်းမှဆက်လက်ပြောကြားသည်။တပ်ကြပ်အောင်နိုင်၏ စစ်သည်တဦး ရပိုင်ခွင့်အားလုံးအား တပ်မတော်ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းယူသွားပြီး ကျန်ရစ်သူမိသားစုအား မိမိနေရပ်သို့ ပြန်ပို့လိုက်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အင်းစိန်ထောင်တွင်း မတရား ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှုများ ပြုလုပ် click
ပြည်ပမှ အသံနှင့်ရုပ်သံ နားထောင်လျှင် လိုင်စင်သိမ်းမည် click
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သံဃာများ စာရင်း (၁) click
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လုံခြုံရေးများ၏ ရမ်းကားမှုနှင့် အနုပညာ လွတ်လပ်ခွင့်
ကမ္ဘာ့ဘလော့ဂ်ပြိုင်ပွဲတွင် အထူးဆုရသူ Mr.Jotman နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ လွတ်မြောက်လာသော အသျှင်ကောဝိဒ
ဂျာမဏီနိုင်ငံဘာလင်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဘလော့ဂ်(Blog)ပြိုင်ပွဲကြီးကနေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စက်တင်င်္ဘာသံဃာတော်တွေရဲ့ ဆန္ဒပြမှုကို အထူးဖော်ပြခဲ့တဲ့ Mr.jotman( Jotman.blogspot.com)ကို နယ်ခြားမဲ့သတင်းထောက်အဖွဲ့ RFSကနေ အထူးဆုအဖြစ် ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်၊Jotman.blogspot.com ကို ဖန်တီးသူကတော့ အခု အာရှနိုင်ငံမှာ ရောက်နေပေမဲ့ သူ့ရဲ့အမှန်နံမည် နဲ့ သူဘယ်နိုင်ငံကလဲဆိုတာကို မပြောလိုပါဘူးတဲ့၊
သူ့ရဲ့ blogမှာ ဘာ့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ စက်တင်င်္ဘာအရေးအခင်း သံဃာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဖော်ပြရတယ်ဆိုတာ အခုလိုရှင်းပြပါတယ်၊
“ကျနော့်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သတ်တာထက်မြန်မာလူမျိုးတွေ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရတာကို ဖော်ပြချင်တာပါ။ ဘာသာရေးနဲ့မပတ်သတ်ပါဘူး၊ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်စပ်မိတာကတော့ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများထံကနေ ၀ိပဿနာကျင့်နည်းကို လေ့လာပြီး မြန်မာဗုဒ္ဒဘာသာကို သင်ယူခဲ့တာပါ။” ဟုပြောခဲ့ပါသည်၊
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 1:54 PM0comments
တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရ၏ အိုလံပစ်ပွဲတော်အား သပိတ်မှောက်ပွဲ သြစတေလျတွင် ကျင်းပကြောင်း သိရှိရ။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရ၏ အိုလံပစ်ပွဲတော်အား သပိတ်မှောက်ပွဲ (ပထမပိုင်း - နိုဝင်ဘာလ - ၁၆ ရက်နေ့ ) ။
မဖြူဖြူသင်း၏ဖခင် ဦးလှထွန်း ကွယ်လွန်ခြင်းအတွက် ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း
အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာသည်များနှင့် မဖြူဖြူသင်း၏ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်များ
မြန်မာနိုင်ငံမှ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ/အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါဝေဒနာသည်များအား မေတ္တာ၊ စေတနာဖြင့် ပြုစုစောင့် ရှောက် ကူညီမှုများ ပေးနေသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်အဖွဲ့ဝင် မဖြူဖြူသင်း၏ မွေးသဖခင် ကျေးဇူးရှင် ဦးလှထွန်း (အသက် - ၆၈နှစ်) သည် နိုဝင်ဘာလ (၁၆)ရက်နေ့ စနေနေ့ ည (၁၀)နာရီက အောင်ရတနာ ဆေးကုခန်းတွင် လူကြီးရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ကြွင်းကျန်ရစ်သည့် ရုပ်ကလာပ်ကို နိုဝင်ဘာလ (၂၀)ရက် အင်္ဂါနေ့တွင် ရေးဝေးသုဿာန်သို့ ပို့ဆောင် သင်္ဂြုံဟ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ရွှေနှင့် အတူ သားသမီးများ ဖြစ်ကြသည့် မစပယ်ဦး၊ မဖြူဖြူသင်း၊ မမာလာထွန်းနှင့် မောင်မောင်မျိုးတို့ သားသမီး (၄)ဦး ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မဖြူဖြူသင်းသည် ဖခင်ကွယ်လွန်ချိန်တွင် နအဖ စစ်အာဏာရှင်များ၏ ပိုက်စိပ်တိုက် လိုက်လံရှာဖွေ ဖမ်းဆီးနေမှုမှ လွတ်မြောက်အောင် ရှောင်တိမ်း နေရသည့်အတွက် ဖခင်၏ ဈာပနသို့ လာရောက်နိုင်ခြင်း မရှိသော်လည်း ဖခင်ကွယ်လွန်ကြောင်းကိုမူ မဖြူဖြူသင်း သိရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ဈာပနအခမ်းအနား ပြင်ဆင်မှုကို မဖြူဖြူသင်းနှင့် အတူ အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာသည်များကို ပြုစုစောင့်ရှောက် ပေးနေသည့် ကိုသန်းထိုက်အောင်၊ ကိုရာဇာနှင့် ကိုအောင်ထွန်းတို့က ဦးစီးဦးရွက်ပြု လုပ်ဆောင်ပေးနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 11:46 PM0comments
နအဖ က အပစ်ရပ်အဖွဲ့ များအား ဒေါ်စုကြေညာချက်အား မထောက်ခံရန် ဖိအားပေးနေ
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 2:40 PM0comments
See how lies to when UN Envoy Piheiro in Insein Prinson.
ကုလသမဂ္ဂ လူ့ အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာပင်နဲရိုး အင်းစိန်ထောင်ကို သွားရောက်စစ်ဆေးတော့ နအဖက ဘယ်လိုညာလည်းဆိုတာ ကြည့်ပါဦး။ ထောင်တွင်းအကျဉ်းချခံနေရသူတွေကို ကျွေးမွေးဖို့ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားတာတဲ့။ ဘာတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကလည်း “အမြဲမပြတ် ဆောင်ရွက်ပေး ဖိုကြီးသန့် ရှင်းရေး” ဆိုပါလား။ ပြထားတဲ့ အိုးတွေကလည်း ပြောင်လက်နေတာ အသစ်မှန်း သိသာလွန်းတယ်။ တစ်ခါမှ မသုံးရသေးဘဲ ပြဖို့ အတွက် ကမန်းကတန်း ထုတ်လာတာမှန်း သိသာပါတယ်။နအဖတို့ ရဲ့မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ညာတာကတော့ ကမ္ဘာကျော်လူလိမ်ကြီးများဘွဲ့ နဲ့လိုက်ဖက်ပါပေတယ်။အင်းစိန်ထောင်တွင်းနဲ့နအဖထောင်တွေတိုင်းမှာ အနေအထိုင် အစားအသောက် ကျန်းမာရေး ဘယ်လောက်ဆိုးရွားပြီး ရောဂါဆိုးတွေ ဘယ်လောက်ဖြစ်ပျက်နေလည်းဆိုတာ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေ ထွက်နေတာအများကြီးပါ။ နအဖရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံရပြီး ပြန်လွတ်လာတဲ့ သူတွေပြောပြတဲ့ ထောင်တွင်းအတွေ့ အကြုံတွေက တစ်ပုံကြီးပါ။
- မြန်မာ့အရေး နိုင်ငံတကာက ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ဖို့ ကုလလူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ပြောကြား click
- သေဆုံး ဖမ်းဆီးခံရသူ အရေအတွက် ပင်ညဲရိုး ခန့်မှန်းနိုင် click
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:08 PM0comments
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ နအဖက အရင်ကတည်းက ဖမ်းထားတဲ့ သူတွေရော နောက်မှ ဖမ်းတဲ့သူတွေရော အားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ အကုန်လွှတ်ပေးပြီး သက်သေပြဖို့ လိုပါတယ်။
ဆက်လက်ဖမ်းတာတွေ လုံးဝဆက်မလုပ်ပြဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ နအဖ အနေနဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအကျိုးကို အမှန်တကယ်လုပ်ပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာ စတင်ယုံကြည်ရပါလိမ့်မယ်။
သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့သော လူမိုက်တို့ရဲ့သွားရာလမ်း တရားတော်
ကုလကိုယ်စားလှယ် ဂမ်ဘာရီရဲ့ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်၏ ရလဒ်အပေါ်သုံးသပ်ချက်
CNN မှ NOV 14th 2007 တွင်ထုတ်လွှင့်သည် ။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 1:42 AM0comments
IT IS NEW TAPE OF SEPTEMBER CRACK DOWN BY THAN SHWE'S GANG
စက်တင်ဘာလအရေးအခင်း New video http://www.channel4.com/player/v2/player.jsp?showId=10056
မြန်မာစာပေတွင် မင်းခယောက်ျား ဟူသော စကားသာ ရှိခဲ့ပေသည်။ ယခုမှ မင်းခရဟန်း ဟူသော စကားကို တီထွင်ရမည့် အခြေအနေမျိုး ဆိုက်နေပေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော် ကဲ့သို့သော နအဖ မင်းတရားကြီး အကျိုးအတွက်ဆိုလျှင် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ နာမည်ပင် သေသေ အမှုတော် ထမ်းရွက်မည့် ဆရာတော်ကြီးများ အကြောင်းကို ကြားနေ ဖတ်နေရသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
နီးရာဓားကို ကြောက်ရသောကြောင့် အာဏာရှင်များ အငြိုအငြင်ကို မခံရဲခြင်းပေလောဟု ဖေးဖေးမမ တွေးဆ ကြည့်မိသော်လည်း ထိုအချက် တခုတည်းကြောင့်ဟု ဆို၍ မရစကောင်းချေ။ ကြခတ်ဝိုင်း အပါအ၀င် အလိုတော်ရိ ဆရာတော်ကြီးများတွင် ထောက်ထားစရာ အခြားကိစ္စများလည်း ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်ကြီးဆိုလျှင် ဘဏ်တွင် အပ်နှံထားမိသော ငွေသိန်းပေါင်း ၃၇၀၀၀ကျော် (နအဖ ငြိုငြင်လျှင်) ဆုံးရှုံးမည့် ကိစ္စမျိုး ပူပင်ကောင်း ပူပင်ပါလိမ့်မည်။အခြား ဆရာတော်ကြီးများ ဆိုလျှင်လည်း နာယက ရာထူးများမှ လျောကျမည့်အရေးတွေးပူကောင်း ပူပေလိမ့်မည်။
သို့မဟုတ် နအဖတွင် ဆရာတော်ကြီးများကို အိတ်ထဲ အပိုင်ထည့်ထား နိုင်လောက်အောင် အကျပ်ကိုင် ထားနိုင်သည့် ကျွန်တော်တို့ မသိသော အောက်လမ်းနည်းများလည်း ရှိနေနိုင်ပါသည်။မည်သို့သော အကြောင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်စေ ထိုဆရာတော်ကြီးများ ကလည်း ကိုယ့်လမ်းကို ကိုယ်ရွေးသွားကြပါသည်။ နောင်တွင်သာ မိမိတို့ တာဝန်မကျေခဲ့မှုကြောင့် မိမိတို့၏ ရဟန်းငယ်သားများ ခိုမှီရာမဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရခြင်း၊ ကျောင်းများ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရခြင်း၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အစော်ကား ခံခဲ့ရခြင်းတွေ အားလုံးအတွက် နောင်တမရကြပါစေနဲ့ ဟုသာ ကျနော်တို့ ဆုတောင်းကြရန် ရှိပါသည်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 11:07 PM 1 comments
ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလမှာ သံဃာတော်တွေ ဦးဆောင်တဲ့ လူထုတိုက်ပွဲတရပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုအုပ်စိုးသူ စစ်အစိုးရက ရက်ရက်စက်စက် ဖြိုခွင်းတာလဲ အားလုံးအသိပါ။ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချ ခံရတဲ့သူများလည်း ထောင်ဂဏန်း ရှိနေဆဲပါ။ အဲသည့် အကျိုးဆက်အဖြစ် ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာရဲ့ ဖိအားပေးမှုကို စစ်အစိုးရ ခံနေရတာလဲ အများ မျက်မြင်ပါ။
အဲတာ စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှုရဲ့ ရလဒ်ကြောင့်ပဲမဟုတ်သလော။ စက်တင်ဘာလူထုလှုပ်ရှားမှုမျိုး တိုင်းပြည်နဲ့ အ၀ှမ်း ထပ်၍ ပေါ်ပေါက်လာဖို့ မလိုအပ်တော့ပြီလော။ စက်တင်ဘာ လှုပ်ရှားမှုတခု တည်းကြောင့် အုပ်စိုးသူများဟာ ဒိုင်ယာလော့ဆိုတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို ကြည်ကြည် သာသာနဲ့ လက်သင့်ခံလိုက်ပြီလို့ ထင်ပါသလား။ စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှုတခုတည်းဖြင့် လုံလောက်ပြီဟု တွက်ချက် နေသူများလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလှုပ်ရှားမှု တခုတည်းဖြင့် မြန်မာပြည် အချိုးအကွေ့အတွက် မလုံလောက်သေးပါ။ စစ်အစိုးရသည် လူထုလှုပ်ရှားမှုကို ပို၍ ကြောက်ရွံ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ ထပ်မံမဖြစ်ပွားအောင် လူထုခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စကားပြောမည်ဟု လေချိုသွေးလာ ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာဖိအားကိုလည်း စစ်အစိုးရက တကယ်တန်းတော့ ဂရုမစိုက်ပါ။ တကယ်တန်းသာ စစ်အစိုးရအဖို့ နိုင်ငံတကာဖိအားကို အလေးထားတယ်ဆိုရင် အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်ကို ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက် မရှိဘဲ ဘာကြောင့် မြန်မာပြည်ကနေ မောင်းထုတ်ရသနည်း။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 9:55 PM0comments
(၁၀)မိုင်ကုန်းတရားစခန်း ဆရာတော် ဇောတိကရဲ့ လူရည်ချွန်တရားတော်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကသဘောထားတွေထွက်ပေါ်လာတာတော့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မေခွန်းထုတ်စရာတွေရှိနေပါသေးတယ်။နအဖဘက်ကအမှန်တကယ်တိုင်းပြည်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်
၂။ဘာကြောင့် ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေ၊ ဘေးကနေ ရေသန့်ဘူးစသည် လှူဒါန်းခဲ့ကြသူတွေကို ယခုထိ ဆက်လက်ဖမ်းဆီးနေပါသလဲ။
၃။ဘာကြောင့် ဘုန်ကြီးကျောင်း နှင့် စေတီပုထိုးတွေဆီ သွားရောက်နေကြတဲ့သူတွေအပေါ် အကန့်အသတ်တွေ လုပ်နေပါသလဲ။
၄။ဘာကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် သံဃာတော်များ နှင့် နိုင်ငံရေးလုပ်ရှားသူတွေ အားလုံးကို မလွတ်သေးပါသလဲ။
၅။ဘာကြောင့် နအဖပိုင် သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ယခုထိ မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒတွေ ပစ်နေသေးပါသလဲ။
၆။ဘာကြောင့် နအဖဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေအနေနဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံနွေးရေးကို မလုပ်ခဲ့ပါသလဲ။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 6:15 PM0comments
အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သော သာသနာ့ဥသျှောင်အဖွဲ့ကြီးမှ ဦးဆောင်ဆရာ တော်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေမှန်များကို သုံးသပ်တင်ပြပြီး လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို အမြန်ဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး ပြုလုပ်စေနိုင်ရန် အမေရိကန် သမ္မတအကြံပေးအရာရှိနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။
လာမည့်နိုဝင်ဘာ (၉) ရက်နေ့ နေ့လည် (၂) နာရီမှ (၄) နာရီအထိ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရန် ချိန်းဆိုထားကြောင်း သာသနာ့ဥသျှောင်ပြောခွင့်ရဆရာတော် ဦးပညာနန္ဒမှ ပြောကြားလိုက်သည်။ လိုအပ်ပါက အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ဒဗလျူဘွတ်ရှ် နှင့်တွေ့ဆုံရန်လည်း စီစဉ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော်မှ ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်သမ္မတဘွတ်ရှ်၊ သမ္မတကတော် လော်ရာဘွတ်ရ်ှနှင့် ပြည် ထောင်စုအတွင်းရေးမှူး ကွန်ဒိုလီဇာရိုက် တို့သည် မြန်မာ့အရေးကို မျက်ခြေမပြတ် အထူးစောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုနေကြသည်။ လွန်ခဲ့သောလကလည်း နအဖစစ်အစိုးရထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာများသို့ တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေနိုင်သော ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို စနစ်တကျ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ယနေ့သတင်းများအရ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဂန်ဘာရီ၏ သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အဆိုပြုမှုကို နအဖစစ်အစိုးရဘက်မှ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းငြင်းဆိုခဲ့ပြီး စိတ်မ ရှည်နိုင်တော့သော ကမ္ဘာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် အမေရိကန်သမ္မတတို့၏ သေချာပေါက်ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတော့ မည့် စစ်အစိုးရအပေါ် အရေးယူဆောင် ရွက်မှုအသစ်များကို မြန်မာပြည်သူများက စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့် ကြည့်နေကြကြောင်း။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 1:33 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:58 PM0comments
နအဖစစ်ခွေးတွေ ကြောက်လိုက်ပုံများ ဘုရားဖူးဖို့အရေး မှတ်ပုံတင်ပါ ယူခဲ့ရမတဲ့ .. ဗုဒ္ဓံပူဂျေးမိပါကလား
ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ တရုတ်သမ္မတ ဟူကျင်းတောင်ဆီ ပို့ဖို့ လက်မှတ်တသန်းပြည့်အောင် အမြန် ထိုးပေးကြပါ။ အခု (၈)သိန်းကျော်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် လက်ဆင့်ကမ်း ဖြန့်ဝေပြီး တသန်းပြည့်အောင် ၀ိုင်းဝန်း လှုံ့ဆော်ပေးကြပါ။ ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူတိုင်း ဒီနေရာ ကို click ၍ လက်မှတ် အမြန်ထိုးပေးကြပါ။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 9:36 AM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်ကိုဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါ၊
အခြား ဒေသခံ တဦးကလည်း ဗီစီဒီခွေ ဖြန့်ဝေမှုအကြောင်း ကြားသိရသော်လည်း ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ပြောဆိုသည်။ယမန်နေ့က တောင်ဥက္ကလာ မြို့နယ်တွင်လည်း အမှတ် ၂ စက်မှုဝန်ကြီးပိုင် တာယာစက်ရုံနှင့် စက်မှုဇုံ အုတ်တံတိုင်းများတွင် စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး အနီရောင် စာတန်းများကို မှုတ်ဆေးဘူးဖြင့် ပက်ဖြန်း ရေးသားခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရှိသူ ဒေသခံ တဦးကလည်း ယခုလို ပြောသည်။“စက်မှုဇုံ ခြံစည်းရုံး အုတ်တံတိုင်းတွေပေါ်မှာနဲ့ လူတွေရှင်းနေတဲ့ လမ်းဘေး အုတ်တံတိုင်းတွေပေါ်မှာ ‘ဘုရားသားတော် သတ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင် ... ကျဆုံးပါစေ’၊ ‘သံဃာတော် သတ်တဲ့ မိစ္ဆာတွေ ... ကျဆုံးပါစေ’၊ ‘သန်းရွှေ ... လူသတ်သမား၊ လူလိမ် လူညာကြီး’ အဲဒါတွေ ရေးထားတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့တွင်လည်း ယမန်နေ့က စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး စာတန်းများနှင့် လူထု လှုံ့ဆော်စာများကို မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှ စတင်ကာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ နေအိမ် ခြံစည်းရိုးများ၊ ဓာတ်တိုင်များပေါ်တွင် လိုက်ကပ်နေကြောင်း သိရသည်။အလားတူပင် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တွင် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မျိုးဆက်သစ် လူငယ် အစည်းအရုံးက CNG (Change New Government) ၊ F.F.F (Freedom From Fear) နှင့် ၈၈ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်၏ ဗကသ အမည်ရှိ ကဗျာတို ပါဝင်သည့် ကပ်ခွါစာရွက်များကို အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး တပတ်ခန့်အကြာမှ စတင်ကာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ယုဇန ပလာဇာ၊ တေးဂီတပွဲများနှင့် လူစည်ကားရာ နေရာများတွင် ဖြန့်ကြဲခြင်း၊ လက်ဆင့်ကမ်း ဝေငှခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ယခုလ ၆ ရက်နေ့ကလည်း ရန်ကုန်တိုင်း လူထုလှုပ်ရှားမှု ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ အမည်ရှိ အဖွဲ့ကလည်း နအဖ သတင်းစာများကို အမှိုက်ပုံများ၊ လမ်းမများပေါ်သို့ လွှင့်ပစ်ခြင်း၊ မီးရှို့ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။သည့်အပြင် ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေနှင့် လှည်းတန်း မြို့နယ်တွင် လူငယ်များက နအဖ သတင်းစာများကို လမ်းမအထက် လွှင့်ပစ်ကြသလို မြို့တွင်းရှိ အချို့ အိမ်နံရံများတွင် ‘သန်းရွှေ လိမ်နေတယ်၊ ညာနေတယ်’ ဟူသည့် ပိုစကာများ လိုက်လံ ကပ်နေသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်ဟု ဒေသခံများက မဇ္ဈိမကို ပြောဆိုကြသည်။
ယခု လဆန်းတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ရန်ကုန်အခြေစိုက် Freedom Fighter အဖွဲ့ကလည်း မြို့တွင်းရှိ သစ်ပင်ကြီးများကို သင်္ကန်းစများ လိုက်လံ ချည်နှောင်သည့် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်မှုကို စတင် လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်၊
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 12:48 AM0comments
တောင်ဥက္ကလာပတွင် မနေ့ကမနက် (၆)နာရီ၌ Spray Campaign လုပ်ဆောင် (၇-၁၁-၂၀၀၇)
နိုဝင်ဘာ (၇)ရက်နေ့ မနက် (၆)နာရီက တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်၊ ဝေဇယန္တာ လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ အမှတ် (၂)စက်မှုဝန်ကြီး ဌာနပိုင် တာယာစက်ရုံ တရုံရဲ့ အုတ်တံတိုင်း နံရံမှာ “ဘုရား သားတော် သတ်တဲ့ စစ်အာဏာရှင် ကျဆုံးပါစေ” ဆိုတဲ့ စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး စာသားတွေကို ကျောင်းသား လူငယ်တွေက မှုတ်ဆေး အနီတွေနဲ့ ပက်ဖျန်ပြီး Spray Campaign တခု လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ မနက် (၆)နာရီခွဲ လောက်မှာတော့ အဆိုပါ ကျောင်းသားတွေဟာ လေးထောင့်ကန်လမ်း တာမွေလေး ဂုံးတံတားအနီးမှာ ရှိတဲ့ အမှတ် (၁) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနပိုင် သကြားလုံးစက်ရုံရဲ့ အုတ်တံတိုင်း နံရံပေါ်မှာ “ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူ ချက်ချင်းလွှတ်” ဆိုတဲ့ စာသားတွေ ရေးသားပြီး Spray Campaign တခု ထပ်မံ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 8:14 AM2comments
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အရေးဟာ ထင်ထားတာထက် အများကြီး ခက်ခဲနက်နဲ တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ဆွေးနွေးကြ သုံးသပ်ကြ အမြင်အမျိုးမျိုး ရှုထောင့် အမျိုးမျိုးက တင်ပြနေကြတာတွေလည်း ရှိခဲ့ ရှိနေ နောင်လည်း ရှိနေကြရဦးမှာပါ၊
အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူတွေကတော့ အာဏာရှင်စံနစ် ချုပ်ငြိမ်းရေး တိုက်ပွဲမှာ မအောင်မြင်သေးပါဘူး။ ဘယ်တော့ အောင်မြင်မလဲ ဆိုတာလည်း ဘယ်သူမှ နီးနီးစပ်စပ်တော့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး ။ အာဏာရှင် စံနစ်ဆိုတာကလည်း အမြစ်ပြတ်ဖို့ သမိုင်းနဲ့ချီပြီး ကြာတတ်တာ မဟုတ်ပါလား။ပြည်သူမှာတော့ ပိုပြီး နင်းပြားဘ၀ကို ရောက်လာခဲ့တဲ့အပြင် ဘာဥပဒေမှ မရှိတဲ့ စနစ်ဆိုးရဲ့အောက်မှာ လူစဉ်မမီအောင် အဖက်ဖက်က နိမ့်ပါးလာခဲ့တယ်။
မဆလ တပါတီခေတ်က နေ၀င်းနဲ့ အခု နအဖ သန်းရွှေဟာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး အင်မတန်ညံ့ဖျင်းပြီး စိတ်ဓာတ် မူမမှန်တဲ့အပြင် ပြည်သူတွေ အပေါ်မှာစေတနာ မရှိဘူး ။ နိုင်ငံတခုထဲမှာ စစ်တပ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး လက်နက်နဲ့ လူထုကို ဖိနှိပ်ဖို့ အကွက်ကျကျ စီစဉ် ထားတယ်။ စစ်တပ်ထဲမှာ သူ့သြဇာခံမယ့်သူကို ရာထူး အာဏာ ငွေ အခွင့်အရေး အမျိုးမျိုးပေး သိမ်းသွင်းထားတယ်။ဒီနေ့ ပြည်သူတွေ မျှော်လင့်နေတဲ့ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှုရှိတဲ့ စနစ်ကိုရဖို့ ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေး နက်ဖြန် သို့မဟုတ် ဘယ်သောအခါ၊ ကမ္ဘာဦးက နေနဲ့လကို မျှော်ရသလို Mission Impossible လိုများ ဖြစ်နေမလား တောင်တွေးမိပါရဲ့။
၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲနဲ့ အခု ၂၀၀ရ လူထုနဲ့ သံဃာ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုမှုပြုကြတဲ့ ကြားမှာ အနှစ်၂၀ လောက် ကြာခဲ့ပါတယ်။ လုံလောက်တဲ့ အချိန်တခု အတွင်းမှာ ကျွန်မတို့ သာမန်ပြည်သူတွေ ဘာတွေ တွေးလို့ ဘာတွေ လုပ်ကိုင်နေခဲ့ ကြပါသလဲ။ နေ့စဉ် လူမှုဘ၀တွေ ကြားမှာ ရှင်သန်အောင် လုပ်ရင်း အချိန်တွေသာ ကုန်လာခဲ့ကြတယ်။ ချမ်းသာတဲ့ သူတွေနဲ့ ကုန်သည်တွေကလည်း သူတို့ စီးးပွားရေး အင်ပါယာ ချဲ့ဖို့ နဲ့ ကားစီး တိုက်ဆောက်ဖို့ ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ အပေးအယူ လုပ်ကြတယ်။ သာမန် လက်လုပ်လက်စားနဲ့ အခြေခံ လူတန်းစားကတော့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ကြားမှာ ပညာအခြေခံ မရှိလို့ အတွေးအခေါ် မရှိကြရတဲ့ အထဲမှာ နအဖ က စနစ်တကျ အမှောင်ချထားတော့ ဘာမှ မသိကြဘူး ။ လူဦးရေ အများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာပီပီ မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ လေး လှူဒါန်းပြီး ၁၂ ရာသီပွဲတော် လေးတွေနဲ့ ရိုးရာစဉ်လာမပျက် ဘ၀နေထိုင်မှု ပုံစံလေးတွေနဲ့ နေကြရရင်ပဲ ကျေနပ် နေကြတာပါ။ တခါတခါ စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် Military Rule စစ်အာဏာရှင် အောက်မှာ နေကြရတာကို သာမန်လူ မဆိုထားနဲ့ ပညာတတ် လူလတ်တန်းစား အလွှာတွေတောင် သတိထားမိကြပုံ မပေါ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ ဒါဟာမဖြစ်သင့်ပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီအနှစ် ၂၀လောက် အချိန်အတွင်းမှာ psychology warfare စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးက အတွေ့အကြုံ နဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ရှိထားတဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေကတော့ ဒီအတိုင်း မနေပါဘူး။ စစ်တပ်ကို လက်ကိုင်တုတ်လို စေလိုရာ စေနိုင်ဖို့ စနစ်တကျ တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး စိတ်ဓာတ်တွေကိုလည်း သူ့သစ္စာခံ တပ်ဖြစ်အောင် ပုံစံသွင်းထားတာမို့ တပ်မတော်သားတွေ ဒီမိုကရေစီဘက်ကို ကူးပြောင်းဖို့ ဆိုတာလည်း လက်တွေ့မှာတော့ မဖြစ်နိုင်သေးပါ။ အစိုးရယန္တရားရဲ့ မောင်းနှင်အားဖြစ်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကိုလည်း ကိုင်တွယ်ရ လွယ်အောင် ဝေးလံတဲ့ဒေသ နေပြည်တော်မှာ ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ အဆက်ဖြတ် ထားလိုက်ပါပြီ။ တော်ရုံတန်ရုံနဲ့တော့ ၀န်ထမ်းလောကကို ထိုးဖောက်ဖို့ မလွယ်ကူပါ။အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေ အရင်လိုပဲ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာတဲ့အထိ နေကြဦးမလား။တနေ့တခြား ပိုပိုပြီး စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းမှုနဲ့ လူချင်းမတူ သူချင်းမမျှ လူသားဂုဏ်သိက္ခာ ရယ်လို့ မရှိတော့ဘဲ အခြေခံအကျဆုးံ အသက်ရှင်ခွင့်တောင် မရေရာတဲ့ ဘ၀တွေနဲ့ ဘယ်အထိ လူလူချင်း ကျွန်ပြု အုပ်ချုပ်တာ ခံကြရဦးမလဲ။ အဖြေကတော့ ဝေးနေဆဲပါ။အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေ ဒီအတိုင်းတော့ မနေကြပါနဲ့တော့။ ကိုယ့်ကို ဂုတ်သွေးစုတ်နေတဲ့ မိစ္ဆာတွေကို အပြီးတိုင် မဖယ်ရှားနိုင် သေးခင်မှာတော့ ရနိုင်သလောက် အင်အားတွေ နည်းတွေနဲ့ အခြေနေပေးရင် ပေးသလို လှုပ်ရှားကြပါ။ ပြည်သူတွေ မအေးချမ်းသလို သူတို့ဘ၀တွေလည်း အမြဲပူလောင် နေစေအောင် တိုက်ပွဲပုံ သဏ္ဍာန် မျိုးစုံနဲ့ လှုပ်ရှားကြရပါစို့်။ စားသာ စားနေရပေမယ့် လည်ချောင်းထဲမှာ အရိုးစူးနေအောင် လုပ်တဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့။ ပြည်ပက ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားသူများကလည်း ပြည်တွင်းနဲ့ အဆက်မပြတ်စေဘဲ အထဲက အခြေအနေမှန်တွေကို ကမ္ဘာကသိအောင် လုပ်ကြရမယ်။ သူလုပ်နေလို့ ငါလုပ်မှ ဆိုတာတွေလဲ မေ့ထားလိုက်ကြပါ ။ ငိုတတ်တဲ့ ကလေးမှ နို့ စို့ရတာပါ။ ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ကိုယ်တိုင် တိုက်ယူမှရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကိုယ့်ပြည်သူကို ချောင်ပိတ်ရိုက်လို့ ရအောင် ကမ္ဘာကြီးက မကျဉ်းမြောင်းတော့ဘူး ဆိုတာတော့ ရူးချင်ယောင် ဆောင်နေတဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေ မသိလို့လား။ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးတဲ့ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေရဲ့ အားပေး ထောက်ခံမှုတွေ စဉ်ဆက်မပြတ်ရအောင် ပြည်တွင်းပြည်ပ နည်းမျိုးစုံနဲ့ မနေမနား ကြိုးပမ်းနေကြဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။သာမန်ပြည်သူတွေကလည်း ခုလို သတင်းခေတ်ထဲမှာ နောက်မကျအောင် နိုးနိုးကြားကြားနဲ့ နေကြဖို့လိုပါတယ်။ ရနိုင်သလောက် သတင်းစုတာမျိုး သတင်း ဖလှယ်တာမျိုးတွေလည်း လုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကို တိုက်ဖျက်တဲ့နေရာမှာ စေ့စပ်ရေးနည်း၊ သံတမန်နည်းတွေကို အကြွင်းမဲ့ အားထားလို့ မရပေမယ့် ရေဆုံးရေဖျား အထိတော့ လိုက်ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တပြိုင်နက်တည်းမှာလည်း အချိန်တခုမှာ တော်လှန်ရေးတရပ်ကို ဆင်နွှဲဖို့ ပြည်သူအားလုံး ပြင်ဆင်ကြရမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါကြောင်း။
မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ အောင်ရမည်။
ဂျပန်သတင်းထောက် nagaikenji အသတ်ခံခဲ့ရမှုအတွက်မြန်မာစစ်အစိုးရကို တရားစွဲနိုင်ရေးကြိုးပမ်းသွားမည်၊
ကုလသမဂ္ဂ အထူးသံတမန်နှင့် တွေ့ဆုံမည့်အရေးနအဖ စစ်ခေါင်းဆောင် အေးတိအေးစက် လုပ်နေ.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အနီး ကင်းစောင်နေသည့် စစ်သားတဦးရန်ကုန် (အေပီ၊ နိုဝင်ဘာ ၅) -
မြန်မာစစ်အစိုးရသည် ကုလသမဂ္ဂ အထူးသံတမန်နှင့် တွေ့ဆုံ နိုင်ဖွယ် ရှိသည့် ဆွေးနွေးပွဲ မတိုင်မီ အထိန်းသိမ်းခံ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ပြင်ပတွင် လုံခြုံရေးကို သိသိသာသာ လျှော့ချခဲ့ကြောင်း တနင်္လာနေ့တွင် သံတမန်များက ပြောကြားသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရအား နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် တိုက်တွန်း ပြောဆိုရန် ရောက်ရှိနေသည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ ခရီးစဉ် တတိယနေ့အဖြစ် ကုလသဂ္ဂ အထူးသံတမန် မစ္စတာ အီဘရာဟင် ဂမ်ဘာရီသည် အသစ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည့် ရန်ကုန်မြို့ မြောက်ဖက်ရှိ နေပြည်တော်တွင် ရောက်ရှိနေသည်။
စက်တင်ဘာလအတွင်း သံဃာတော်များ ဦးဆောင်သည့် အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများကို စစ်အုပ်က အပြင်းအထန် နှိမ်နင်းခဲ့ပြီးနောက် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒုတိယအကြိမ် ရောက်ရှိခဲ့သည်။
စစ်အုပ်စုသည် ဂမ်ဘာရီ၏ ခရီးစဉ် အသေးစိတ်ကို ထုတ်ဖော် ပြောကြားခြင်းမရှိဟု သံတမန်များက ပြောကြားသည်။ စစ်အစိုးရ ထိန်းချုပ်ထားသည် မီဒီယာများတွင်လည်း ဂမ်ဘာရီ၏ ခရီးစဉ်ကို ဖော်ပြခြင်း မရှိချေ။
ဂမ်ဘာရီသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး မြို့တော်ဖြစ်သည့် ရန်ကုန်မြို့သို့ လာရောက်ရန် မျှော်လင့်နေသည်ဟု သံတမန်များက ပြောဆိုသည်။
စစ်အုပ်စုက ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူများကို အပြင်းထန်ဆုံး နှိပ်ကွပ်နေချိန်တွင် ရာနှင့်ချီသည့် အဓိကရုဏ်း နှိမ်နင်းရေး ရဲများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်ပြင်ပ ပတ်ပတ်လည်တွင် စောင့်ကြပ်ချထားခဲ့သည်။ မကြာသေးမီ သီတင်းပတ်များအတွင်းက လုံခြုံရေးချထားမှုကို လက်နက် အပြည့်အစုံ တပ်ဆင်ထားသည့် ရဲနှစ်ဒါဇင်သို့ လျှော့ချခဲ့သည်။
ယနေ့ တနင်္လာနေ့တွင် ရဲဒါဇင်ဝက် လောက်ကိုသာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိမ်ပြင်ပတွင် တွေ့ရပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်တွေက အင်လျားကန်အတွင်း လှည့်လည် စောင့်ကြပ်နေသည့် ရေတပ်ကင်းလှေကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်ဟု သံတမန်များက ပြောဆိုသည်။ သဲအိတ်တွေ ကာထားသည့် ကတုတ်ကျင်းပုံစံ စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုလည်း ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
ဂမ်ဘာရီသည် တနင်္ဂနွေနေ့က အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးနှစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၁၈နှစ်အတွင်း ၁၂နှစ် ခန့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်း အကျယ်တ၀င့် အသေးစိတ် ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တစောင်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် အတိုက်အခံအုပ်စုများအကြား ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်အောင် အားထုတ်မှု တစိတ်တဒေသအဖြစ် ဂမ်ဘာရီအနေနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် တွေ့ဆုံခွင့် ရမည် မရမည်မှာ ယခုအချိန်အထိ မရေမရာ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
နအဖစစ်ခွေးတွေ ၀ိုင်းရိုက်လို့ သေရတဲ့ ကျောင်းသား မောင်ကိုကိုဝင်း(၂၂နှစ်)ရဲ့
သေဆုံးခဲ့ရသည့် ကျောင်းသား အာဇာနည် မောင်ကိုကိုဝင်း (၂၂နှစ်)သည် စက်တင်ဘာလ (၂၆)ရက်နေ့က နအဖစစ်ခွေးများ၏ လူမဆန်စွာ ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက်မှုကို ခံရပြီးနောက် ရရှိခဲ့သည့် ဒဏ်ရာများ မသက်သာသဖြင့် သင်္ကန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသရင်း စနေနေ့က သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊
ဒါနဲ့ အပြင်ကျောင်းများတွင် တက်ရောက်နေကြတဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ လို အစိုးရ၀န်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ ပုံမှန်ကျောင်းသားများကို မေးမြန်းကြည့်ရာတဲ့အခါမှာ သူတို့ တို့အားလုံးကို လည်း သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေက အလားတူခိုင်းစေမှုတွေ ရှိနေကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူမှ လက်မှတ်မထိုးကြကြောင်း၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ပိတ်ပင်မယ်လို့ချိမ်းခြောက်လာလို့ သာ ကျောင်းသားအချို့ တောင်းဆိုချက်များကို မလုပ်ချင်ဘဲနဲ့လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရကြောင်း သိရပါတယ်။။ဒါနဲ့၎-၁၀-၂၀၀၇ နေ့ရောက်တော့ xxxx တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် xxxx က xxxx တက္ကသိုလ် ပင်မဘွဲ့နှင်းသဘင် ခန်းမမှာ ကျွန်တော်တို့ ၀န်ထမ်းသင်တန်းသား အားလုံးကို ခေါ်ယူပြီးတော့ "တိုင်းပြည်ကို မချစ်ဘူးလား၊ ချစ်ရင် လက်မှတ်ထိုးကြရမယ်" လို့ဆွဲဆောင်စည်းရုံးပြီးတော့ ကျွန်တော့်တို့အား အတင်းအဓမ္မ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး လက်မှတ်ထိုးဖို့ဆန္ဒမရှိလို့ဘယ်သူမှ လက်မှတ်မထိုးကြသေးပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ လက်မှတ်တွေ မရရင် ဆရာမကြီးအတွက် ဒုက္ခရောက်မှာကို စိုးရိမ်ကြတာရော၊ ဆရာမကြီးကိုယ်တိုင် က ဒီိပြဿနာတွေကို သိလို့ကျောင်းသားတွေကို ငိုယိုတောင်းပန်ခြင်းလာလို့ ရော။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ ရှေ့ရေး၊ မိသားစုရှေ့ရေးကို ထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်ရလို့ ရော ကျွန်တော်တို့တွေ နောက်ဆုံးမှာ အလုပ်ချင်ဘဲ ဆန္ဒမပါဘဲ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရြပါတယ်။
၂။ မိမိတို့သည် အေးချမ်းစွာပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိမှုကို ချစ်မြတ်နိုးပါသည်။လို့ ဘဲ နအဖအစိုးရအတွက်မဟုတ်ဘဲ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုလို လက်မှတ်ရေးထိုးဖော်ပြချက်များ၊ တစ်တိုင်းပြည်လုံးရှိ ၀န်ထမ်းများစွာ၊ ကျောင်းသားများတို့ လည်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ အလားတူ ဖိအားပေးခံရမှု ကြောင့် ဆန္ဒရင်းမှန်မပါဘဲ လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ရသော ဖော်ပြချက်များကို နအဖက လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံမှာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေး ဖော်ဆောင်ဖို့ရောက်ရှိနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီကို ကြွားလုံးထုတ်ပြီး တင်ပြလိမ့်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲက မလာဘဲ၊ ဖိအားပေး မှုကြောင့် ရေးသားခဲ့ရတဲ့ ဒီ လက်မှတ်ထိုးဖော်ပြချက်တွေကို အမှန်အတိုင်းသိကြဖို့မြန်မာတစ်ပြည်လုံး၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး သိရအောင်၊ အထူးသဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်တော် နဲ့ကုလသမဂ္ဂ နဲ့အခြား အရေးပါတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူတွေအားလုံးကို မီဒီယာများကနေ တဆင့် မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီ မပြန်မီ အလျှင်အမြန် အရေးတကြီးအချိန်မီ တင်ပြပေးစေ လိုပါတယ်။ အားလုံးဝိုင်းဝန်း လုပ်ပေးကြပါ။ မစ္စတာ ဂမ်ဘာရီကို နအဖကပေးမယ့် လက်မှတ်ထိုးစာရွက်စာတမ်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေ ကျောင်းသားတွေ ပြည်သူတွေကို အတင်းဖိအာေးပေးခိုင်းပြီး ခြိမ်းခြောက်ပြီးထိုင်းခိုင်းတဲ့ စာရွက်စာမ်းတွေပါလို့ ။ ကျွန်တော်တို့ရင်ထဲကတကယ်ဖြစ်စေချင်တာက မြန်မာပြည်အရေးကို ကုလသမဂ္ဂကနေ ထိထိရောက်ရောက် ၀င်ရောက်ဆောင်ရွက်စေချင်တာပါ။
When Ibrahim Gambari, the UN envoy, left Myanmar he left behindacountry in turmoil, the military in absolute control andapopulation in fear.One of the monks, who declined to give his name, said he is determined to carry on the fight for freedom.He said: "No, I'm not afraid. But I'm afraid to get arrested, I'm afraid to die because I want to be alive. I want to fight the government, I want to keep away from [being] arrested. I will try."
After the protests, the military government had arrested hundreds of monks and activists. They describe routine beatings and poor conditions within the prisons."I saw so many men - their backs were very red from the beatings. Some of the monks were bleeding from their mouth because the soldiers were hitting them withastick, and one monk didn't have any teeth left," the monk said.
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 10:28 PM0comments
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 4:58 PM0comments
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူထုလှုပ်ရှားမှတ်တမ်း
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 10:35 AM0comments
မြန်မာစစ်အစိုးရက ထိပ်တန်း အကောင်းစား တံဆိပ်ခေါင်း အသစ်တမျိုး ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ နအဖ ခေါင်းဆောင် တပ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေရဲ့ ပုံနဲ့ပါ။တံဆိပ်ခေါင်းသစ်ဟာ စာအိတ်မှာ မကပ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့သတင်း ရွှေနားတော် ပေါက်ကြားတော်မူလို့ တပ်ချုပ်ကြီးက အမျက်မာန် ရှတော်မူတာကြောင့် အရေးယူတော်မူဖို့ စစ်ဆေးစေလို့ အမိန့်တော် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒါနဲ့ အထူးစုံစမ်းရေးက်ာမရှင် ဖွဲ့စည်းပြီး ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းဇော် ကိုယ်တိုင်ဦးစီးကာ စာတိုက်ကြီးကို ရောက်ချလာပြီး တံဆိပ်တော်ခေါင်း ကော်မကပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းမြစ်ကို စစ်ဆေးတော်မူပါသတဲ့။
တလတိတိ ကြာအောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ အထူးစုံစမ်းရေးကော်မရှင်က တံဆိပ်တော်ခေါင်း ကော်မကပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း အစီရင်ခံတင်ပြပါတယ်။
(၁) တံဆိပ်ခေါင်းတော်ဟာ တံဆိပ်ခေါင်းအင်္ဂါနဲ့ ပြည့်စုံတယ်။
(၂) ကော်ရှိရ ကပ်ရမယ့် ဘက်မှာလည်း ပြည့်စုံကောင်းမွန်တယ်။
(၃) တံဆိပ်ခေါင်း သုံးသူများက ကော်သုတ်တဲ့ ဘက်ကို တံတွေးမဆွတ်ဘဲ မျက်နှာစာဘက်ကို တံတွေးထွေးနေတယ် … တဲ့။
(အင်္ဂလိပ်လို ပေးပို့လာတာကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မူရင်းရေးသူရော ပေးပို့သူကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 10:32 PM 1 comments
ကုလကိုယ်စားလှယ်ကို နအဖ က လက်မခံခြင်းအပေါ် ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်တုံ့ပြန်
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 6:31 PM0comments
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုစိုးထွန်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုစိုးထွန်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ဒီနေရာမှာနားထောင်ပါ၊၊
နိုင်ငံရေးအဓိပ္ပါယ်ရှိ၍ ပြောင်မြောက်သော ဟာသပျက်လုံးများ တင်ဆက်သည့် လူရွှင်တော်ဦးပါပါလေး၏ အိုးဘိုထောင်တွင်း အတွေ့အကြုံ ဒီနေရာမှာနားထောင်ပါ၊၊
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 5:45 PM0comments
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကို အတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ့ ပစ်ကစားလို့ ရပြီ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေအား အမျိုးသမီး အတွင်းခံ ဘောင်းဘီဖြင့် ပစ်ကစားသည့် အင်တာနက် ဂိမ်းတမျိုးကို အမေရိကန် နိုင်ငံ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ အခြေစိုက် Mochi Media ကုမ္ပဏီက စတင်ထုတ်လုပ်လိုက်သည်။
“Panties for Peace” ဟု အမည်ရသည့် အဆိုပါဂိမ်းသည် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ပထမဆုံး ဂိမ်းဖြစ်ပြီး ရွေ့လျား ခုန်ပေါက်နေသည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအား အတွင်းခံဘောင်းဘီဖြင့် ပစ်ရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအား အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ ထိမှန်ပါလျှင် ခန္ဓာကိုယ်တစဆီ ပဲ့ထွက်သွားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင်အခြေစိုက်သည့် Lanna Action for Burma အဖွဲ့က အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသမီး အတွင်းခံဘောင်းဘီများကို မြန်မာသံရုံးသို့ပို့သည့် လှုပ်ရှားမှုအား စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး စင်ကာပူ၊ သြစတေးလျနှင့် ဥရောပနိုင်ငံများရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ အမျိုးသမီးများလည်း လိုက်ပါလှုပ်ရှားကြသည်။
လော့စ်အင်ဂျလီစ်မြို့တွင်နေထိုင်သည့် ကိုအောင်မိုးဝင်းက “မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒီလိုဂိမ်းမျိုး တခါမှ မတွေ့ဖူး သေးဘူး။ တော်တော်ထိရောက်တဲ့ message လို့ ပြောရမယ်။ ဆော့ရတာလည်း လွယ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ သဘောကျမယ်ထင်တာပဲ” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
နည်းပညာတိုးတက်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပြီး ထိရောက်သည့် လှုပ်ရှားမှုတခုဖြစ်သည်ဟုလည်း ကိုအောင်မိုးဝင်းက ပြောသည်။ ၎င်းဂိမ်းကိုမသိသေးသည့် မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများကိုလည်း ဖြန့်ဝေပေးသည်ဟု ဆက်ပြောသည်။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 2:34 PM0comments
ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သခြင်း သက်သက်မျှသာ လုပ်တဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေကို ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်တဲ့ သန်းရွှေရဲ့ စစ်တပ်တွေကို ဘယ်လို အနုနည်းနဲ့ ထပ်မံ ရင်ဆိုင်ဦးမလဲဆိုတာ ကျနော်တို့ လူသာမန်တွေ စဉ်းစားနိုင်ပါသေးသလား။ နောက်ကျန်မယ့် အနုနည်းတွေဟာ လိုက်လျော အလျှော့ပေးခြင်း၊ အညံ့ခံခြင်း၊ ကျိုးနွံ နာခံခြင်းကလွဲလို့ ဘာမှ မဖြစ်နိုင်တော့တာကို အထင်းသား တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလမ်းအတွက်လည်း ရေလာမြောင်းပေး လုပ်သူကလုပ်၊ ဘေးတီး ပေးသူကတီးနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဟာ မျှော်လင့်ချက် မဲ့သလို ဖြစ်နေတယ်။
နိုင်ငံခြားကို အားကိုး မျှော်လင့်သူကလည်း မျှော်တယ်။ နိုင်ငံခြားကလည်း ဆွေးနွေးပွဲတွေ ထုတ်ပြန်ချက်တွေ လုပ်ရုံ၊ ကရုဏာကြေးလေး ပေးရုံကလွဲလို့ စစ်အာဏာရှင် ဖယ်ရှားပစ်ရေးကို လေသံတောင် မဟကြတော့ဘဲ ဗြောင်ရက်စက်မှု အလီလီ လုပ်ပြတဲ့ စစ်တပ်အခန်းကဏ္ဍကို အသိအမှတ်ပြု လက်ခံဖို့တောင် ပြောနေကြပြီ။ အနှိပ်စက်ခံ မြန်မာပြည်သူများအတွက် အားကိုးရာ မရှိသလိုပါဘဲ။ ကျနော်တို့ ဘာကြောင့် ဒီလို အားကိုးရာမဲ့၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ ဖြစ်နေရမှာလဲ။ ကျနော်တို့ဟာ ထွန်းပြောင်တဲ့ သမိုင်းရှိတဲ့ ပြည်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတာကို သတိမရ ကြတော့ဘူးလား
သူများကို ဘာကြောင့် အားကိုးချင် ကြတာလဲ။ ကျနော်တို့ကိုယ် ကျနော်တို့ မယုံကြည်ကြတော့ဘူးလား။ ကျနော်တို့ဘက်က ဘာတွေများ ချို့ယွင်းနေလို့လဲဆိုတာကို အဖြေရှာရပါမယ်။ သေချာပါတယ်၊ ကျနော်တို့ဘက်က ချို့ယွင်းချက်တွေကြောင့်သာ ဒီလောက် ရက်စက် ယုတ်မာတဲ့ အုပ်စိုးသူ စစ်အာဏာရှင်တွေ ကြာရှည် ကြီးစိုးနိုင်တာပါ။ ကျနော်တို့ဘက်က မချို့ယွင်းခဲ့ရင် ဒီတိုင်းပြည်က စစ်အာဏာရှင်တွေ သူ့ကိစ္စနဲ့ သူတောင် ပြီးသွားလောက်ပါပြီ။
ဒီတော့ ကျနော်တို့ဘက်က ချို့ယွင်းချက် တချို့ကို လေ့လာကြည့်ချင်ပါတယ်။ အတိတ်က အကြောင်းတွေ ပြန်ပြောင်း ပြောနေရင်လဲ အငြင်းအခုံ ဖြစ်နေတာနဲ့ လိုရင်း မရောက်တတ်လို့ မျက်မှောက် ကိစ္စကိုပဲ စိစစ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ကျနော်တို့ လိုအပ်နေတာက ဘာလဲ။ ကျနော်တို့ လိုအပ်နေတာက “တော်လှန်ရေး” ပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတို့ မဟုတ်သေပါးဘူး။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဖြုတ်ချရေးပါ။ တော်လှန်ရေးဆိုတာ ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ပြောင်းလဲရေးဖြစ်တယ်။ ပြုပြင်ယူတာ မဟုတ်ဘူး။ နအဖ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ဂိတ်ဆုံးနေပါပြီ။ သူတို့ဟာ အစွယ်ရော အမြီးပါ ပေါက်နေတဲ့ ဘီလူးတွေပါ။ လူသားမစားရင် နေလို့မရတဲ့ အကောင်တွေပါ။ သူတို့ရှိနေသ၍ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေ မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ လက်ငင်း ဖြစ်ပျက်နေတာတွေဟာ ဒီအချက်ကို သက်သေပြ နေတာပါပဲ။
တော်လှန်ရေးဆိုတာ ဖောက်ပြန်တဲ့ လူတန်းစား တရပ်ကို အခြား တော်လှန်ရေး လူတန်းစားက အကြမ်းဖက် ဖယ်ရှားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းမဖက်ဘဲနဲ့ ဖယ်ရှားလို့ မရပါဘူး။ ဒါကို ပြတ်ပြတ်သားသား ကျနော်တို့လူတွေ ယုံသလား။ မယုံသေးရင် တော်လှန်ရေး မဟုတ်တဲ့ နည်းတွေနဲ့ ထပ်စမ်းဦးပေါ့။နောက်ထပ် ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုလောက်။
ကျနော်တို့ ချို့ယွင်းနေတာက တော်လှန်ရေးကို တော်လှန်ရေးလို မလုပ်ခြင်းပါဘဲ။ ရှင်းအောင် ပြောရရင် ရန်သူကို အကြမ်းဖက် မဖြုတ်ချခြင်းပါဘဲ။ ၈၈ ကလည်း ဒီအမှားပဲ။ အခုလည်း ဒီအမှားပါပဲ။
ရန်သူကို အနုနည်းနဲ့ ရင်ဆိုင်လို့ ရန်သူက ပျော့ပျောင်းသွားပြီး ကိုယ့်ကို မသတ်ဘူးလို့ အခုလို အချိန်မှာ ထင်စရာ ရှိပါသေးလား။ ဒီတော့ စစ်အာဏာရှင် ဘီလူးတွေကို ကွယ်ပျောက် စေချင်ရင် အင်အားသုံး အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှ ရမှာပါ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ စွမ်းပကားက အင်အားပါပဲ။ ပြည်သူ့ဘက်က အင်အားကို ရန်သူတိုက်ဖို့ မသုံးရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြိုးချည်ပြီး လည်စင်းပေးရာသာ ကျနေလိမ့်မယ်။
တော်လှန်ရေးကို ဆန့်ကျင်လေ့ရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားက မြှောက်ပေးတိုင်း စိတ်ကူးမယဉ်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီတော့ အကြမ်းဖက်ရေးဟာ စစ်အာဏာရှင်လို ရန်သူနဲ့ ရင်ဆိုင်ရာမှာ မသုံးမဖြစ် လိုအပ်ချက်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားက လူတွေက အချိန်ကြာညောင်းပြီး ရန်သူကို ကျနော်တို့ အောင်ပွဲမဆင်နိုင်ရင် ကျနော်တို့ကိုပဲ အပြစ်တင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကို စွန့်ခွာသွားပါလိမ့်ဦးမယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ ကြမ္မာကို ကျနော်တို့ပဲ ဖန်တီးရမှာပါ။
နောက်ချို့ယွင်းချက်က “စေ့စပ်ရေး ရောဂါ” ပါ။ စေ့စပ်ရေးကို လုပ်ဖို့အရေး အချိန်တွေ ဘယ်လောက် ပေးခဲ့ရပြီလဲ။ နအဖက ဒီပဲယင်း လူသတ်မှုလိုဟာမျိုးကို ကျူးလွန်ကတည်းက ကျနော်တို့ သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။ နအဖရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ချေမှုန်းရေးပဲ ဖြစ်တာကို အကြောင်းအချက် များစွာမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျနော့်တို့ကရော သူတို့လို ဘာကြောင့် ချေမှုန်းရေးစနစ် မသုံးနိုင်တာလဲ။ ဘာတွေက တားဆီးနေပါသလဲ။
စေ့စပ်ရေး မျှော်လင့်ချက်ဟာ ရန်သူချေမှုန်းရေး အဆင့်ကို ဘယ်တော့မှ ရောက်စေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ အပြတ်အသတ် နိုင်စရာ ဘယ်ရှိတော့မလဲ။ နိုင်စရာ မရှိတော့ အားပေး ထောက်ခံတဲ့သူတွေ အထူးသဖြင့် စစ်တပ်ထဲက အရာရှိတွေ ဘက်ပြောင်း လာရဲပါ့မလား။ စေ့စပ်ပြီးရင်လည်း သူတို့က ဒုံရင်း ဒုံရင်းပဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သူတို့ သိထားမှာပဲ။ ဘာကြောင့် အလုပ်ရှုပ် ခံကြမှာလဲ။ ဒီတော့ ရန်သူ စစ်အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ချချင်ရင် အခုအချိန်မှာ စေ့စပ်ရေး အတွေးအခေါ် လုံးဝကင်းစင် နေရမယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင် ဘယ်လို လှုပ်ရှားမှုပဲ လုပ်လုပ် စေ့စပ်ရေး အတွေးအခေါ်ကြောင့် ခဲဆွဲထားသလို လေးကန်နေပြီး တဘက်ရဲ့ ဖြိုချတာကိုပဲ ခံနေရပါလိမ့်မယ်။
ရန်သူကိုလည်း အကျပ်အတည်း အခြေအနေအလိုက် အမြတ်ထုတ်နိုင်အောင် နောက်ဖေးတံခါး ဖွင့်ပေးထားသလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအချိန်ဟာ စေ့စပ်ရေး လုပ်သင့်တဲ့ အချိန်မဟုတ်ပါ။ တိုက်ခိုက်ရေး စိတ်ဓာတ်ကိုသာ ပြည်သူတွေကို သွင်းပေးသင့်ပါတယ်။ သန်းရွှေက ဒေါ်စုကို အကန့်အသတ်တွေ လုပ်သလိုပဲ ကျနော်တို့ကလည်း “စေ့စပ်ရေး” ကို သင့်တော်တဲ့ အခြေအနေတရပ် မပေါ်မချင်း လုံးဝ မစဉ်းစားသင့်ပါ။ အခုလို အချိန်ဆိုမှာ ပိုလို့ပင် ဝေးဝေး ရှောင်ရပါလိမ့်မယ်။ အလွန် မသင့်တော်သော အချိန်အခါပါပဲ။
“တော်လှန်ရေး” ဆိုတာ ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ သဘာဝတရားပါ။ ရေဆူတာတို့ မီးတောင် ပေါက်တာတို့ မီးဖွားတာတို့ဟာ အဆင့်တခုအတွက် အားစိုက် ပင်ပန်းကြရတာပါပဲ။ ကျနော်တို့ တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုနဲ့ တူတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ စူးဝင်နေတာက အဲဒီမျှားနှစ်ချောင်းပါ။ “အကြမ်းမဖက်ရေး” နဲ့ “စေ့စပ်ရေး” ပါ။ အဲဒီမျှားတွေကို နုတ်ပယ်နိုင်တာနဲ့အမျှ တော်လှန်ရေးဟာ အားကောင်းမောင်းသန်ပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အမြစ်ကနေ နုတ်ပယ်နိုင်မှာပါ။
သတင်းတင်သူ... thanhtut at 8:24 AM0comments
ကျောင်းသားတပ်မတော် (ABSDF)ဖွဲ့စည်းခြင်း (၁၉)နှစ်မြောက် အခမ်းအနား လွတ်မြောက်နယ်မြေ တနေရာတွင် ကျင်းပပြုလုပ် (၁-၁၁-၂၀၀၇)